चिकित्सा शिक्षा आयोगको अध्यक्ष बन्न केसीलार्इ प्रधानमन्त्रीको आग्रह | Alagdhar
घरBanner Newsचिकित्सा शिक्षा आयोगको अध्यक्ष बन्न केसीलार्इ प्रधानमन्त्रीको आग्रह
चिकित्सा शिक्षा आयोगको अध्यक्ष बन्न केसीलार्इ प्रधानमन्त्रीको आग्रह
काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रमुख विपक्षी कांग्रेसलाई देखेर दया लागेको बताएका छन् । डा. गोविन्द केसीको अनसनको त्यान्द्रो समातेर कांग्रेसले राजनीति खोजेको भन्दै उनले चर्को आलोचना गरे ।पुष्पलाल स्मृति दिवसको अवसरमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सम्बोधनको अधिकांश समय कांग्रेसलाई गाली गर्नमा खर्चिएका थिए। उनले डा. केसीलाई स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा कस्तो सुधार गर्नुपर्छ भन्ने बहसमा आउन र चिकित्सा शिक्षा आयोगको अध्यक्ष आफैं बन्न आग्रह पनि गरेका छन् ।
अहिलेको हारबाट कांग्रेस आत्तिएको उल्लेख गर्दै उनले कांग्रेसले आफूहरूलाई लोकतन्त्रको पाठ सिकाउनु विचित्र भएको बताए।‘हामी पनि प्रतिपक्षमा थियौं। ३३ सिट मात्र ल्याएका थियौं। तर हामीले धैर्यता गुमाएनौं। शालिन ढंगले जनताबिच जाने, नबुझेका कुरा बुझाउने काम गर्‍यौं। हिंसात्मक दमनको शान्तिपूर्ण प्रतिरोध गर्‍यौं।
अहिले हाम्रो बहुमत आयो,’ प्रधानमन्त्रीले भने,‘कांग्रेसले जे गरे पनि लोकतन्त्र जसो गरे पनि लोकतन्त्र। आफू नभएपछि उसलाई अधिनायकवाद आयो।’ प्रधानमन्त्रीले २०४८ सालमा कांग्रेसको एकमना सरकारका पालामा आफूहरूमाथि पनि कांग्रेसले दमन गरेको बताए। केही मानिसको अनसन र फुर्सदका बेला निकालेको जुलुस देशको सम्पूर्णता नभएको उनले बताए ।
तर, सरकारले ल्याएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा संशोधनका लागि प्रतिपक्षसँग कुरा गर्न सरकार तयार रहेको उनको भनाई छ । प्रधानमन्त्री ओलीले मेडिकल एसोसिएसनका नाममा डाक्टरहरुले हुलहुज्जत गरेको आरोप लगाए । सरकारी जागिर खाएका डाक्टरहरुले आफ्ना स्वार्थका लागि उपचार गर्दिन भन्नु अमानवीय भएको बताए । आफ्ना स्वार्थका लागि डाक्टहरुले हुलहुज्जत गर्न पाइन्छ रु यही हो लोकतन्त्र रु’ प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्न गरेका छन् ।
अघिल्लो लेखमामलामी गएका दुई पक्षबीच झडप हुँदा वडाध्यक्षसहित २ जना घाइते
अर्को लेखमामेगा बैंक नवौँ बर्षमा प्रवेश